भागरथीको परिवारलाई कोरियाबाट आयो, दुई लाख ८३ हजार आर्थिक स’हयोग – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भागरथीको परिवारलाई कोरियाबाट आयो, दुई लाख ८३ हजार आर्थिक स’हयोग
१८ फागुन -ब’ला त्कार पछि ह’ त्या गरिएकी बैतडीकी भागरथी भट्टको परिवारलाई सुदू’रपश्चिम समाज कोरियाले रु दुई लाख ८३ हजार ५०० आर्थिक स’हयोग गरेको छ ।
समाजका कोषाध्यक्ष डीआर पनेरु, पूर्वअध्य’क्षद्वय नरबहादुर सार्की र धर्मराज जोशी, पूर्वसचिव सुरेन्द्र भण्डारी, पूर्वकोषाध्यक्ष नवराज भट्टल’गायतको समूहले भट्टको घरमै गई बैतडी दोगडाकेदार गा’उँपालिका अध्यक्ष चक्र कार्की र वडाध्यक्ष भरतसिंह महरालगायतको उपस्थितिमा सहयोग हस्ता’न्तरण गरेको हो ।
गत माघ २१ गते बिहान वि’द्यालय गएकी भागरथीको ब’ला त्कार पछि ह ‘त्या घट’नापश्चात घरको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भन्ने समाचार बाहि’रिएको थियो । उक्त समाचार आएपछि सुदूरपश्चिम समाज कोरियाले गत माघ २५ गतेदेखि ‘भागरथीकी आमाका आँशु पुछौँ’ अभि’यान शुरु गरेको थियो । उक्त अभियानमा कोरियामा रहेका १६९ सहयोगीहले स्वःस्फूर्तरूपमा सह’योग गरेका थिए ।
अभियानबाट कूल रु २७ लाख ३८ हजार ३९१ कोरियन वन रकम सङ्क’लित भएको र सोही रकम भट्टको परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको सुदूरपश्चिम समाज को’रियाले जनाएको छ । भट्टको ह ‘त्यारा भनिएका एक किशोरलाई यसअघि नै प्रहरी सार्व’जनिक गरिसकेको छ ।(रासस)
नायिका रिया चक्रवर्तीको अनुहार लु’काएर फिल्म ‘चेहरे’को पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । उनको अनुहारदेखाइपोष्ट सा’र्वजनिक गरिएपछ ब’लिउडमा विभिन्न प्रशन उठ्न थालेका छन् ।
रमा अमिताभ बच्चन, इम’रान हाश्मी, अन्नू कपूर, क्रिस्टल डिसूजा, धृतिमान चटर्जीलाई देख्न सकिन्छ। तर रिया चक्रवर्ती भने पोस्टरमा देखा’इएको छैन। रियाले सन् २०१९ मा एक फोटो सेयर गर्दे आफू फिल्मको हिस्सा बनेको कुरा खु’लाएकी थिइन। तर अहिले भने उनलाई न पोस्टरमा देखाइएको छ ।
रियालाई पोस्ट’रमा नराखिएपछि उनको एक साथीले बलिउड रियालाई स्वा’गत गर्न अझै तयार नभएको बताएकी छन् । सुशांत सिंह राजपूतको आ त्मह त्या प्रकरणमा उनको नाम मि’सिएपछि पोष्टरमा उनको नाम नराखिएको हुन सक्ने बताइएको छ । चेहरे रहस्य मय थ्रिलर फिल्म हो जुन ३० अप्रिलमा प्रद’र्शनमा आउने तय भइसकेको छ । – ओएस नेपालबाट
अन्तत सपना विनयजंग बस्नेत वि’रुद्ध उ जुरी दिन आइतवार पुगीन् काठमाडौ प्रहरी परिसर, विनयजंगसंग भएका अन्य युवती पनि खतरामा !
राति ८ बजेपछि को’रोना बढ्ने अनि बिहान घ’ट्ने यो कहाँको अध्ययन हो ?: गगन थापा
दाङमा एकै दिन दिदी-बहिनीको मृ त्यु